कति घन्टा सुत्ने ? धेरै सुत्नाले पनि हुन सक्छ समस्या – Interview Nepal
कति घन्टा सुत्ने ? धेरै सुत्नाले पनि हुन सक्छ समस्या
काठमाडौं, पुस २७ । पर्याप्त निद्रा नपुग्दा त्यसले रोग निम्त्याउँछ, भर्खरै गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार निद्रा नपुग्नाले हृदयसम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ ८ घन्टाभन्दा बढी सुत्नाले पनि हृदयसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा हुन्छ ।
अध्ययनमा आठ घन्टाभन्दा ज्यादा सुत्नेहरूमा पनि ऐथिरोस्क्लेरोसिसको खतरा हुने देखिएको छ । अनुसन्धानकर्ताले जो महिला आठ घन्टाभन्दा ज्यादा सुत्छन्, उनीहरूमा मुटुसम्बन्धी रोगको खतरा ज्यादा हुने पत्रा लगाएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न डा। वेलिन्टिन फ्युस्टका अनुसार गुणस्तरीय छोटोे निद्राले पनि हानिकारक तत्वलाई टाढा राख्छ । ज्यादा मदिरा र क्याफिनको सेवनले निद्रालाई प्रभावित गर्छ ।
अनुसन्धान टिमले स्पेनमा चार हजार बैंकरमाथि अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये ४६ वर्ष उमेरका सहभागी कुनै पनि प्रकारको मुटुसम्बन्धी रोगबारे जानकार थिएनन् । निद्राको मापनका लागि सहभागीले एउटा ‘एक्टिग्राफ’ लगाएका थिए । यो एउटा यस्तो यन्त्र हो, जसले सात दिनको निद्रा, आराम र गतिविधि आदिको मापन गर्न सक्छ ।